Obi ọmịiko maka Nweta Mpụga Akçaray | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliObi ọmịiko maka ihe agafe agafe Nkwụsị Akçaray
14 / 05 / 2020 41 Kocaeli, NTỤTA IHE, Auctions, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, tram
Emere akwara maka ụzọ dị elu iji nye ohere maka nkwụsị akcaray.
Obodo Kocaeli, nke mere ka ụgbọ njem dị mfe site na ịnye okporo ụzọ Ak toaray maka ọrụ ụmụ amaala, bidoro ọrụ maka ịgafe agafe ụkwụ n'akụkụ Sekapark Tram. Oge a, Obodo ukwu ahụ mere nro maka owuwu ụzọ na-esote ụkwụ na-esote tram nke ụlọ ọgbakọ Congress na Mmụta Ọzụzụ na Sekapark. A ga - eji Sekapark Tram Stop overpass ga - arụ ọrụ ga-agafe nkwụgharị ụkwụ, ọrụ nke bidoro.
Abalị abụọ ga-emerịrị ya
Otu n’ime ihe ndị agafere aga-ewu n’ebe dị nso na Congress Center na Education Campus tram na-akwụsị ga-abụ mita 63.40, ogologo 3.35 na nke ọzọ mita 43.85 na ogologo na 3.35 mita n’obosara. Saịtị a ga-anapụta n’ime ụbọchị iri mgbe ejiribido nkwekọrịta nkọwa dị mkpa abata. A na-ezube ịgafe ụzọ abụọ a ga-agwụ na ụbọchị kalenda 10.
Ejiri ụlọ ọrụ 13
E mere nrịgo maka ụzọ njem njem nke abụọ na ụlọ ọrụ isi obodo Mgbakọ Metropolitan na Tuesday, Mee 12, na 14.30:13. Na nro nke ụlọ ọrụ 4 sonyere, ọnụahịa kacha ala sitere na Meter Energy Construction na TL 960 nde 7, ebe ọnụahịa kachasị elu sitere na Oğuzata İnşaat na TL 389 nde XNUMX puku.
ụlọ ọrụ enye
Mita Mita Mgbakọ Ewu 4 nde 960 puku TL
Companylọ Ọrụ Helka Helka 5 nde 71 puku TL
Mehmet Aydin, Ali Cengiz 5 nde 395 puku TL
Hulusi Özay 5 nde 914 puku TL
Ụlọ ọrụ Emay 5 nde 929 puku TL
Ihe owuwu nke Sya 6 nde 207 puku TL
Abdurrahim Aydın Yurtçu 6 nde 282 puku TL
Atlasbk ewu 6 nde 460 puku TL
İlkgün Construction 6 nde 513 puku TL
Fettah Kızılyıldız, Yılmaz Aynas Construction 6 nde 565 puku TL
Dilşad Mining Map Construction, Ahmet Aydın 6 nde 570 puku TL
Gürtur Construction, Cihan Üregen 6 nde 889 puku TL
Oğuzata Owu 7 nde 389 puku TL
Emebiela njem nkwụsị bọs na ngafe
Passgabiga ga-eme ka ọ dịrị gị mfe ịnweta Sekapark Site Tram
Ọpụpụ dị na Kocaeli na-enye Ụgbọ njem na-adịghị mma
Akara na Nfefe ga-ewu na Niğdeye
Ndị nnọchiteanya nke TCDD ga-abịa Bozüyük maka ihe ndị dịgasị iche iche na-agafe
Enwere ezigbo ụkọ nke ọhụrụ Akçaray Line 'Ịfefe'
Estghafe ije ụkwụ ga-abịa na Stç Akçaray atọ
Na-agafe na Elazığ
Na-agafe na Tavşanlı Kwadoro na Mpaghara Mpaghara
Kọmitii Nkà na ụzụ nke TCDD nyochara na Bozüyük maka Lower na Upper Passages
Obodo Giresun na-eme ka iwu kwadoro maka ntụgharị
Agafefe na nrịgogo
Old Overpasses na Ankara
Agafee na Old Ankara
Sekapark Tram kwụsị
Ebe ọrụ, azụmahịa na ụlọ ọrụ ga-emepe na Oge Ejiji?
Ihe nzuzo nke ime nnukwu Logo
Ngwọta Na Azụ Ahụ Na-efe Ọrịa Abụghị Nkewa, Nkwado
Id were ngalaba azụmahịa nke mba ofesi nke Limancılık
A ga-ewebata Silivri 4th Stage Social Housing Project
Tever kwuru nkwupụta banyere Nnukwu Ọzụzụ National Electric Train
Ndi akagbuola ememe a maka ụgbọ oloko mba ahụ ịbanye n'okporo ụzọ n'okpuru aha TÜRASAŞ?
Mee ohere maka ihicha ahịhịa na ahịhịa na ndụ gị!
Iwu nke ise
Kwadebe ‘Alphabet Egwuregwu’ maka .mụaka
Minister Akar ekwuputala! Mwepu si na 31 Mee
668 Liter Liquor adịgboroja na İskenderun
Ndị na - eto eto Ozi Ọma Maka Ndị Na - eto Eto Na - erite Uru Na Nchedo Steeti!
Akụkụ kacha mkpa nke ọdụ ụgbọ mmiri a na-akpọkọta ọnụ n'otu ụlọ ọrụ Turkey Port Operators Association nke azụmaahịa ụgbọ mmiri na mbubata mbupụ ụgbọ mmiri nke Turkey (M TÜRKLİM), azụmaahịa ọdụ ụgbọ mmiri. [More ...]
Ndi oche oche ekpe ga-efu efu na ụgbọ elu ụgbọelu Turkish?
Uzo mmebi na mmebi a di ugbua odi nma na isi obodo
Usoro ihe omume ụgbọ na Akcay Akcay
Ejiri Ogwe Mgbochi maka Ekwoaray kwụsịrị
Akçaray Stops ghọrọ Ebe Izmirite!
Enweela nsị na nkwụsị